Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Nwalere ma nwalee: Ogige Boot na Seychelles dị ịtụnanya
Njem njem • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Akụkọ dị iche iche
Ogige Boot Seychelles
Otu ndị na -anụ ahụ ike sitere na Russia chọtara njem nlegharị anya zuru oke na mgbapụ ụgbọ mmiri Seychelles na nso nso a.
Ogige akpụkpọ ụkwụ Slim Fit Club bụ ihe “dị elu” na a na-ahọrọ ebe dị ịtụnanya iji maa ndị sonyere aka.
Ebumnuche nke ebe a na -eme mkpọtụ bụ ịkwalite oke mmadụ.
N'ime ụbọchị iri ha nọ n'agwaetiti ahụ, ndị ọbịa si Russia sonyere na ihe omume dị egwu dịka zip-linen na ịrị ugwu na Constance Ephelia Resort.
Ogige Boot okomoko - N'ezie ihe!
Ihe omume a na-eme kwa afọ, ogige akpụkpọ ụkwụ Slim Fit Club bụ ihe “dị elu” na-ahọrọ ebe dị ịtụnanya iji maa ndị sonyere aka.
Ebe ahọpụtara ga -enwerịrị ike ịnye ohere zuru oke maka egwuregwu na ihe egwuregwu, nchọpụta ọdịbendị obodo na akụkọ ihe mere eme, yana odida obodo kwesịrị ekwesị iji maa ahụ ike nke ndị sonyere aka. A họpụtara Seychelles ọ bụghị naanị maka ịma mma ya mana nke kachasị mkpa bụ naanị ya.
N'iburu ọgwụgwọ okomoko site na ịpụ, onye ọrụ ụgbọ elu Russia Aeroflot nyere ndị sonyere na ntinye mbata abụọ mgbe ha si n'ọdụ ụgbọ elu Sheremetyevo tinyekwara ego mgbazinye na akpa, onyinye akara na ịntanetị nwere ekele.
Mgbe ị na -aga, chọrọ ọrụ nke ndị mmekọ mpaghara, gụnyere 7º South na Creole Travel Services, nke nyere ọrụ ha na imekọ ihe ọnụ iji hụ na ihe omume gara nke ọma.
Na -enyocha oke anụ ahụ
Ebumnuche nke ebe a na -adọba ụgbọala bụ ịkwalite njedebe mmadụ, otu n'ime ihe omume dị na kalenda nke ụmụ nwanyị Slim Fit Club bụ ịga na ọnụ ọnụ ugwu Morne Blanc na Dans Gallas, ihe omume abụọ na -etinye ogo ahụike ha ule mgbe ha na -ekpori ndụ. ụzọ abụọ dị egwu na agwaetiti Mahé. N'ịbụ ndị okike gbara ya gburugburu, Polina Kitsenko na ndị ọrụ ụgbọ mmiri Slim Fit ha nwere obi ike n'ugwu dị elu na iru mmiri dị elu, na-eji obere nsogbu bute ya n'elu, na-enweta vistas na-eku ume na njedebe njem ahụ.
N'ime ụbọchị iri ha nọ n'agwaetiti ahụ, ndị ọbịa si Russia sonyere na mmemme dị egwu dị ka zip-lining na ịrị ugwu na Constance Ephelia Resort n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Mahé.
N'ụbọchị ha na -agabeghị na mpụga ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ahụ, mmemme ahụ abụghị ihe na -agwụ ike, ndị sonyere na -eji ọtụtụ ọrụ mmadụ na otu eme ihe. Ndị a gụnyere oge ọzụzụ egwuregwu ugboro atọ n'ụbọchị.
Ụdị Creole na -agbagọ
Ọ bụghị ọrụ niile maka Slim Fit Club adepts bụ ndị mere njem ụgbọ mmiri catamaran pụrụ iche na Sainte Anne Marine Park nke gụnyere nleta na njem nlegharị anya Moyenne Island, ogige kacha nta nke ụwa nyere ndị obodo. Seychelles site n'aka onye odeakụkọ mbụ na Robinson Crusoe nke oge a, Brendon Grimshaw, na mmanya ọdịnala Creole dị n'ụsọ osimiri.
N'ịbụ nke e mere n'otu n'ime ebe obibi nke anọ Seasons Resort Seychelles (aha ụlọ oriri na ọ locationụ fullụ na ọnọdụ ya), a kpọrọ ụmụ agbọghọ ahụ oriri na ọoụ Creụ Creole n'okpuru isiokwu 'Ọnwa ọnwa na Paradaịs' iji mechie ogige mara mma nke ọma. Ndị Pirates bụ otu ndị Seychelles, Emere akụkụ a na -adịghị ahụkebe n'akụkọ ihe mere eme nke agwaetiti ahụ site na klaasị mixology na mmekorita ya na ndị na -emepụta mmanya na mpaghara Takamaka Rum n'okpuru isiokwu 'In Search of Treasures'.
Social Media na ndị ọzọ
Ịmepụta ọdịnaya mara mma ma dị oke mma, na-egosipụta ọdịiche dị iche iche nke ebe a na-aga, ọdịdị ya, ahịhịa na anụ ọhịa, osimiri, ihe omume a na-enye na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, Nwada Kitsenko, onye na-anụ ọkụ n'obi na onye na-ewu ewu, ji aka mee ka ihe omume ya kwa ụbọchị pụta ìhè. ndị ahịa dị elu n'ofe Russia na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta ya.
Ndị sonyere ndị ọzọ biputere ma kesaa akụkọ maka mmezu ha site na Seychelles, na -egosi agwaetiti nke agwaetiti Indian Ocean dị ka ebe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -atọ ụtọ.